Buckles Manufacturers & Suppliers - China Buckles Factory
Yakasimba Arc Side Kuburitsa Buckle Yepamusoro Hunhu
Iyo ine simba arc yekuburitsa bhandi yakagadzirwa neyemhando yepamusoro epurasitiki simbi POM jekiseni rekuumba.Chigadzirwa chacho chine chaiyo mold kuvhurwa, kutarisisa kune zvakadzama, kunaka kwekugadzirwa, uye yakanaka tensile simba.Inokodzera shangu, zvipfeko, mabhegi, zvigadzirwa zvekunze uye mamwe maindasitiri.
Chimiro nhamba: SB017
tsanangudzo: 0.75 * 1 * 1.25 * 1.5 * 2
Mhando: Yakasimba arc parutivi kuburitsa bhagi
Zvimiro: Yakanaka elasticity uye yakasimba kudhonza simba
Bag Backpack Zvishandiso Plastic Release Buckle
Zvimwe zvakakwana kugadzira, basa riri nani.Chigadzirwa chine buckle chine national patent certification.Inokodzera mabhegi ekufambisa, mabhegi emakomo, mabhegi ekuchengetedza, helmets yekuchengetedza, pet leashes, etc. Yakasimba uye yakasimba, isiri nyore kupfeka.
Chimiro nhamba: SB141-B
Types: Simba redivi rekuburitsa buckle
Patented Yepamusoro-yemhando yePlastiki Release Buckle
Buckle ine patent certification, mhando yepamusoro uye yakawanda yepakutanga dhizaini, ichakuunzira iwe mushandisi ari naniruzivo.Inogona kunyatsoenderana nemabhegi, mabhegi, zvipfeko, ngowani uye zvimwe zvigadzirwagadzira chigadzirwa chakakwana.
Chimiro nhamba: SB141-A
Kuchengetedzwa Kwezvakatipoteredza Plastiki POM Kuburitsa Buckle
Iyo eco-inoshamwaridzika bhagi yakagadzirwa nemhando yepamusoro yepurasitiki zvinhu haina zvinhu zvinokuvadza kumuviri wemunhu, uye inogona kushandiswa zvakachengeteka kumabhegi, mabhegi ekufambisa, zvipfeko, ngowani nezvimwe zvinhu.Haina-chepfu uye haina kunhuhwirira kwakasarudzika, uye haizombokanganisa hutano hwevanhu.
Chimiro nhamba: SB136
tsanangudzo: 0.75 * 1 * 1.5mm
Yakakora, yakakura, yakakura kubereka simba, nzvimbo yakatsetseka isina mabhura.Kugadzirwa kwakanaka kwemhando inokubvumira kutenga wakasununguka uye kushandisa zvakanaka.Sarudzo yakanakisa yezvishandiso zvekupfeka uye mukwende.Hunza iwe yakanakisa mushandisi ruzivo.
Chimiro nhamba: SB134
High Quality Gobvu Buckle Luggage Bag Accessories
Sarudzo yemhando yepamusoro yezvigadzirwa zvakaita semabhegi, mabhegi emukwende, mabhegi ekufambisa, ngowani dzekuchengetedza, masutukesi, uye leashes dzemhuka.Hunhu hwepamusoro, kupfeka kuramba, elasticity yakakura uye yakasimba tensile simba ndiwo maitiro ayo.
Chimiro nhamba: SB125
tsanangudzo: 0.75 * 1 * 1.5
POM Yemhando yepamusoro Arc Side Inoburitsa Backpack Buckle
Yakagadzirwa neyemhando yepamusoro yePOM zvinhu, ine elasticity yepamusoro uye yakasimba yekudhonza simba.Yakasimba uye haisi nyore kukwegura.Kutora imwe-chidimbu chekugadzira maitiro, mipendero yebhandi yakatenderedzwa uye yakatsetseka pasina kukuvadza maoko ako.Iyo yakakora dhizaini haisi nyore kukuvadza.
Chimiro nhamba: SB032
POM Yakasimba Yekuchengetedzwa Kwemamiriro ekunze Buckle
Iyo bhagi rekuchengetedza rakagadzirwa nemhando yepamusoro yePOM zvinhu, inoshamwaridzana nenharaunda uye inogara, uye haisi nyore kukuvadza.Kuenzaniswa nemapurasitiki akajairwa, yakanyanya elastic uye ine huwandu hwakakwana hwematayera kuzadzisa zvaunoda zvakasiyana.Inogona kukupawo masevhisi akagadziridzwa kuti ugadzire zvigadzirwa zvako.
Chimiro nhamba: SB015
Iyo ine simba divi rekuisa yakatevedzana buckle, yakanaka elasticity, yakasimba kudhonza simba, yakasimba uye inogara, isiri nyore kudonha, yakazara yakatarwa, gobvu uye kutenderera.Inokodzera mabhegi ekukwira makomo, mabhegi ekufambisa, ngowani, nezvimwe.
Chimiro nhamba: SB011
Yakasimba Buckle Yekufamba Bag Mountaineering Backpack Suitcase
Yakagadzirwa nePOM zvinhu zvine super performance.Kana ichienzaniswa neyakajairwa epurasitiki zvinhu, ine yakasimba tensile simba uye yakakura elasticity.Iine huwandu hwakawanda hwekushandisa, yakasimba, uye haisi nyore kuchembera.Inokodzera mabhegi ekufambisa, masutukesi, mabhegi, helmets yekuchengetedza, etc. Mhando dzezvigadzirwa.
Chimiro nhamba: SB014